Global Voices teny Malagasy » Tahotra sy ahiahy: Ny fiainan’ny Zeorziana any Gali, Abkhazia · Global Voices teny Malagasy » Print
Tahotra sy ahiahy: Ny fiainan'ny Zeorziana any Gali, Abkhazia
Voadika ny 09 Desambra 2019 5:50 GMT 1	 · Mpanoratra Chaikhana.media Nandika Salohy Randriafanomezantsoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Miditra ao amin'ny faritr'i Gali any Abkhazia rehefa avy miampita ny renirano Ingur. Vondrom-poko Zeorziana ny ankamaroan'ny mponina ao amin'io faritra io. Saripikan'i Chai Khana, nahazoana alalana.
Tao amin'ny Chai-Khana.org  no nangalana ity tantara manaraka ity ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Efa ho sivinjato metatra eo ho eo..
Izany no elanelana manasaraka ny foko Zeorziana monina any amin'ny faritra misintaka Abkhazia amin'ny faritany fehezin'ny governemanta Zeorziana. Io ihany koa no elanelana manasaraka an'i Badri*, 34 taona, amin'ny vady aman-janany rehefa fahavaratra. Io no elanelana tsy nahafahan'i Nika*, 23 taona, nanohy ny fianarany haka mari-pahaizana tany amin'ny oniversite.
870 metatra, no halavan'ny tetezana miampita ny renirano Inguri, izay no hany lalana sisa ara-dalàna hiampitana mankany amin'ny zaratany fehezin'i Zeorzia ankehitriny. Nandritra ny telo volana tamin'ity taona ity izay dia nanjary lasa malaza amin'ny tsy fandriampahalemana nanjaka tamin'ny vahoaka manodidina ny 30.000-40.000 isan'andro io toerana io.
Manamarika ny tsipika mampizara ny Zeorziana sy ny Abkhaz ny tetezana, sisintany miholakolana izay nipoitra taorian'ny adin'ny Zeoziana-Abkhaz tamin'ny taona 1992-1993 taorian'ny fianjeran'ny Firaisana Sovietika. Tao anatin'ny hafanan'ny ady, ​​maro ny foko Zeorziana nandositra nankany amin'ny faritra hafa ao amin'ny firenena mba hahazoana fiarovana.
Rehefa nifarana ny ady tamin'ny taona 1993, maro no niverina nody tany amin'ny toerana niaviany tany Gali. Raha nameno ny distrika ny ankamaroan'izy ireo dia miaina ao anatin'ny tahotra sy ny ahiahy izy ireo, anisany mahatonga izany ny tetezana Inguri. (Tamin'ny taona 2008, nanaiky ny fahaleovantenan'i Abkhazia i Rosia ary mbola manohana ny faritany ara-toekarena sy ara-miaramila mandraka androany. Nankatoa an'i Abkhazia ho faritanin'i Zeorzia ny ankabeazan'ireo firenena mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana – fanamarihan'ny toniandahatsoratra.)
Fidirana mankany amin'ny tetezana Enguri, ilay hany tokana mankany amin'ny faritany fehezin'i Zeorzia, fehezin'ny manampahefana Abkhaz. Nakatona indroa tao anatin'ny volana maromaro izy io. Saripikan'i Chai Khana, nahazoana alalana.
Ho an'ny foko Zeorziana mipetraka any Gali, lalana mankany an-tsekoly, hopitaly ary mankany amin'ny fianakaviana ny tetezana Inguri. Miampita izany izy ireo mba hividianana entana mora kokoa sy mba hitady tolotra kalitao tsara kokoa ho an'ny fampakaram-bady sy ny fandevenana. Miampita io tsipika mampizara io isan'andro isan'andro ny olona noho ny antony samihafa.
Ary nakatona ny lalana hiampitana nandritra ny telo volana tamin'ity taona ity.
Nisaratsaraka ny fianakaviana. Mitolona amin'ny fandehanana mankany amin'ny oniversite ireo mpianatra. Lasa nanjary tsy azo tanterahana mihitsy na dia ny fandehanana fotsiny handeha hijery fampisehoana aza.
Na dia misokatra aza amin'izao fotoana ny lalana fiampitana dia nanamafy ny faharefoan'ireo foko Zeorziana mipetraka ao Abkhazia hatrany ny famerana nandritra ny telo volana amin'ny fivezivezena .
“Tena fotoan-tsarotra tsy hay faritana izany. Tamin'ny volana Jolay, rehefa niatrika fanadinana nasionaly ny mpianatra tany Gali dia nandoa [kolikoly] mitentina 5.000 robla ( 77 $) ny ray aman-dreny, ny sasany 10.000 ( 152 $) mba hiampitana. Tsy te hiverina any [Gali] aho raha mbola mitohy ny fanao toy izany. Gadra izahay. Tena tsy hay ny miaina ao anatin'ny toe-javatra toy izany,” hoy i Nika.
Misy ny tsy rariny isan'andro, toy ny fanesorana ny fiteny Zeorziana any an-tsekoly any Gali. Ary avy eo misy ny olana fototra amin'ny fiarovana bebe kokoa, toa ny tsy fahafahana manoratra anarana ny fananana, ny mifidy na ny tsy fitokisana fa hanampy ny polisy rehefa mila azy ireo ianao.
“Mampalahelo fa tsy dia lehibe loatra ianao.” Natao ho vazivazy izany ho an'ny mpiambina sisintany, saingy midika izany fa tsy navela handalo ireo lehilahy Zeorziana efa ampy taona (18-65 taona) izay nikasa hiampita ny Inguru. Raha tsy hoe angaha mandoa kolikoly izy ireo.
Niatrika an'io safidy io foana i Badri nandritra ny fahavaratra rehefa narary ny zanany. Tsy ampy famatsiana sy fahaiza-manao maoderina ny hôpitaly any Gali noho izany dia nita ny Inguri ny vadiny mba hitondra ireo zanany mankany amin'ny hopitaly tsaratsara kokoa any an-drenivohitra Zeorziana, Tbilisi . Raikitra i Badri rehefa nanidy ny lalana fiampitana ny manampahefana Abkhaz ho valin'ny fihetsiketsehana tao Tbilisi tamin'ny volana Jolay.
Nandritra ny telo volana mahery, tsy nahazo niampita ny sisintany ireo lehilahy nonina tao Gali. Nahatonga ny vahoaka tao Gali hatahotra sy ho sorena ny zavatra niainana na dia nesorina aza ny fanakanana tamin'ny 2 Oktobra.
Tamin'ny taon-dasa, nanidy ny sisintany indroa ny manampahefana Abkhaz. Tsy nanan-tsafidy ny foko Zeorziana monina ao Gali rehefa nitranga izany: na izy ireo miezaka mandoa kolikoly na mijanona any an-tanindrazana.
“Tsy maintsy nandoa vola mitotaly 5000 robla aho ( 77 $). Nandoa vola 1.000 robla (15 $) isaky ny mandalo aho… mba ahafahako mamangy ny zanako marary sy ny vadiko, izay any amin'ny hopitaly tany Tbilisi. Fiainana ve izany? Saika very saina aho, nasiana havokavoka tsy voajanahary ny zanako ary tsy afaka nitsidika azy ireo aho, ” hoy i Badri.
Na dia ny kolikoly 15$ aza tsy afaka miantoka ny fahombiazana. Indraindray mandray ny vola, indraindray tsy mandray izany ny mpiambina ny sisintany . Niova ny vola tokony aloa: voatery nandoa vola mitentina 46$ i Nika mba ahafahany miampita sy misoratra anarana amin'ny programam-pianarana master.
“Nandoa 2.000 robla (30 $ ) fanindroany aho. Voatery nanoratra fanambarana ho an'ny Ministeran'ny [Fampianarana Zeorziana] aho taty aoriana mba hangataka fanampiana ara-bola handoavana ny saram-pianarana ary tsy maintsy niampita ny tetezana Inguri fanintelony sy nandoa 2.000 robla indray aho , ”hoy izy.
Tsy zava-baovao akory ny fanapahan-kevitra hanakatona ny sisintany fiampitana: nakaton'ny manampahefana Abkhaz izany tamin'ny volana Janoary, noho ny filazana fa nisy ny fiparitahan'ny valan'aretina gripa tao amin'ny faritany fehezin'i Zeorziana.
Izany no antony nilazan'ny Zeorziana monina ao Gali fa lasa “gadra” ao an-tanindrazany izy ireo noho ireo fanapahan-kevitra henjana miraraka avy amin'ny manampahefana Abkhaz izay mametra ny fivezivezen'izy ireo.
Tena nanelingelina tanteraka ho an'ny mponin'i Gali ny fanakatonana hany ka nanao fihetsiketsehana tsy fahita firy  teo ivelan'ny foibem-pitantanam-paritra mihitsy aza izy ireo tamin'ny volana Janoary . Nahatonga ny mpiaro ny vahoaka Abkhazia hisolo vava ho azy ireo mihitsy aza ny fihetsiketsehana. Nanentana ny manampahefana Abkhaz mba handinika ny filàn'ny vondrom-piarahamonina ao Gali ny Mpanelanelana eo amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana Asida Shakril.
Saingy tsy tsikaritry ny mponina any an-toerana ho nanao fanatsarana ny toe-draharaha niainan'izy ireo ny manampahefana tao Abkhazia .
Fa tsikaritr'izy ireo kosa anefa ny politika mikendry ny hanery azy ireo handao ny fonenany any Gali. Tamin'ny taona 2008, rehefa nankatoavin'i Rosia ny fahaleovantena Abkhaz dia nanjary lasa tsy maintsy nilaina ny fananana pasipaoro Abkhaz na karatra fanamarinam-ponenana. Talohan'izay, ny pasipaoro sovietika ary, ho an'ny zaza tsy ampy taona, ny taratasy fanamarinam-piterahana no tena nampiasaina.
Vondrom-poko Zeorziana miandry eo amin'ny departemantan'ny polisy any Gali mba haka ny fahazoan-dàlana honina. Mitarazoka sady mbola tsy azo antoka ny dingana. Saripikan'i Chai Khana, nahazoana alalana.
Voatery miankina amin'ny antontan-taratasy manokana ny mponina ao Gali izay tsy nahazo zom-pirenena Abkhaz, Taratasy laharana faha-9, izay tsy maintsy havaozina isam-bolana na in-droa. Nekena ho enim-bolana izany amin'ny tranga tsy fahita firy. Tsy maintsy mampiseho izany antontan-taratasy izany ny mponina ao an-toerana mba hiampitana mankany amin'ny faritany fehezin'i Zeorzia.
Saingy tena sarotra tokoa ny fahazoan-dalana honina – sata noforonina ara-dalàna ho an'ny vahiny nefa ampiharina amin'ny foko Zeorziana na dia fonenan'izy ireo aza i Gali.
Nani *, 58 taona, mipetraka any Lekukhona, tanànakely iray any Gali. Efa roa taona izy izao no niandry ny fahazoan-dalany honina .
Na izany aza, tsy manan-jo fototra akory izy ireo any Gali na dia nahazo ny fahazoan-dàlany honina aza i Nani sy ny fianakaviany. Ohatra, tsy manan-jo hividy trano na hividy tany izy ireo. Tsy afaka mifidy izy ireo.
“Niandry filaharana hatramin'ny maraina ka hatramin'ny alina nandritra ny roa herinandro mahery izaho sy ny fianakaviako telo mba haka fahazoan-dalana honina… nofy ratsy ny zava-mitranga eto , tsy misy fiafarana sady miharatsy miharatsy hatrany, ” hoy izy.
Novana ny anaran'ireo olona nanontaniana, mba hiarovana ny mombamomba azy ireo. Tsy namoaka ny anaran'ny mpanoratra ny Chai Khana noho ny fitandrovana ny momba azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/09/144904/
 nanao fihetsiketsehana tsy fahita firy: https://oc-media.org/protest-in-gali-against-closure-of-border-crossings/